शीर्षक – पाँचखालमा खुल्लेआम बालुवा तस्कर !! स्थानियले गरे तालाबन्दी !! – RadioMBC
Home > Front News > शीर्षक – पाँचखालमा खुल्लेआम बालुवा तस्कर !! स्थानियले गरे तालाबन्दी !!
२८ माघ २०७४, आईतवार १४:५३
मिलन लामा ,पांचखाल
पाँचखाल नगरपालिका भित्रका केही स्थानहरुमा महिनौ अघिदेखि खुल्लेआम बालुवा लगायतका सामाग्रीहरु अबैधरुपमा बेचबिखन र चोरी-निकासि हुँदै आएको र उक्त बिषय सम्बन्धित वडा कार्यालय र नगर प्रमुखलाइ समेतलाइ पटक – पटक जानकारी गराउदा यसलाइ बेवास्ता गर्दै उक्त कार्यलाइ उल्टै प्रसय दिएको आरोप सहित २६ गते शुक्रबार कार्यलय समय अगाबै वडा नम्बर १३ का स्थानिय बासिन्दाहरुले नगरकार्यालय पुगि फौजी शैलिमा मुल ढोकामै ताला लगाएका हुन ।
जोगलाल लामा ‘प्रकास’ को नेतृत्वमा सैयाैँको सङ्ख्यामा पुगेका आक्रोसित वडाबासिहरुले बालुवाको अबैधानिक चोरिनिकासीको बिरोध गर्दै नगर परिसरमा चर्को नाराबाजी लगाएका थिए ।
तालाबन्दि र नाराबाजिका क्रममा प्रहरिले एक्कासी बल प्रयोग गरेर धरपकड गर्न खोजेका थिए तर स्थानियको बाक्लो उपस्थितिले यो बिफल हुन पुग्यो ।
बालुवाको तस्करी सन्दर्भमा पाँचखाल नगर कार्यालयमा लागेको तालाबन्दी सङ्गै काभ्रेको सबै राजनितिक दलहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । जायज र शान्तिपुर्ण बिरोध कार्यक्रममा आफुहरुको पनि समर्थन रहेको जानकारी गराउदै सनिबार बामगठबन्धन पाँचखालले सम्युक्त बिज्ञप्ति जारी गरेका छन ।
माओबादी केन्द्रका पाँचखाल अध्यक्ष मणिराज गौतम र एमालेका अध्यक्ष गँगाप्रसाद अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तिमा मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षले गुण्डागर्दी सैलिमा आफ्नो ओहदाको मर्यादा बिपरित अपसब्द बोल्दै हातपात भएकोमा गम्भीर आपत्ती जनाएका छन । स्थानिय अभियन्ताहरु जोगलाल लामा ‘प्रकास’, निर्माल त्रिपाठी, रामशरण उप्रेती, धावा लामा समेतलाइ गाली-गलौज , हातपात भएको बिज्ञप्ति मा उल्लेख छ ।
स्थानिय अभियन्ता जोगलाल लामा ‘प्रकास’ लाई उक्त तालाबन्दी र हातपातको बिषयमा नेपाल न्युज डट प्रेसले प्रस्न गरेका थियौ । लामाले आफ्नै सब्दमा यसो भने ‘ म लगायत यस अभियानमा सम्लग्न केहि साथिहरुलाइ लक्षित गर्दै अपसब्द तथा हातपात भएकै हो ।यसलाइ कडा सब्दमा निन्दा गर्न चाहान्छु । किनकी हामिले उठाएका बिषय अत्यन्त गम्भीर जायज छ । प्राकृतिक सम्पदा माथी कसैले मनोमानी दोहन गर्न पाइदैन ।’
तपाहरुको थप संघर्षको कार्यक्रम केहि छ कि भन्ने प्रस्नमा लामा थप्छन ‘मेयर ज्यु ले हामी सबैको मुखिन्जेल अहिलेसम्म तिमालबेसी बगरमा भए गरेको अबैधानिक गतिबिधि अबिलम्ब रोक्ने प्रतिबद्दता ब्यक्त गर्नुभएको छ ।
यदि यसलाइ ब्यबाहारमा लागू नभएमा यो भन्दा कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने छौं र तिब्र प्रतिरोधमा उत्रनेछौ ।शुक्रबारको घटना शुरुवाती ‘एक्सन’ मात्र हो । फेरि बैधता र विधि पकड्ने हो भने बालुवा बिक्री – बितरणमा हाम्रो आपत्ती रहँदैन ।’